कीर्तिपुरमा उजाडिएको डेरावाल जीवन
अंगदबहादुर सिंह काठमाडौं - मंगलबार, भदौ ३०, २०७७
कीर्तिपुरको एउटा अँध्यारो कोठा। नितुले लाख बिन्ती गरिरहिन् तर, शम्भु कुटिइरहे।
कुटाइ सहन नसकेर केही बेरमा शम्भुको प्राणै गयो। नितु बेहोस भइन्।
घटना शुक्रबारको थियो।
नितुकै आँखा अगाडि उनी मृत्युसँग मडारिइरहे।
श्रीमान शम्भुलाई छोडिदिन नितुले लाखौं बिन्ती बिसाइन्।
तर, निर्दयी घरबेटीले उनको पुकार अनि चित्कार सुनेनन्।
निरन्तर मरणतुल्य हुने गरी ढोकाको आग्लोले छाती र टाउकोमा बजारिरहे।
नितुले जति बल गर्दा पनि घरबेटी प्रेमकृष्ण महर्जनकी श्रीमती र दुई छोरीको चङ्गुलबाट छुट्न सकिनन्।
उनीसँग श्रीमानले जीन्दगीको भीख मागेको टुलुटुलु हेर्नुबाहेक विकल्प नै थिएन।
उनी श्रीमानको कुटाइ र छटपटी हेर्न विवश भइन्।
निर्दयी घरबेटीसामु उनको जोड चलेन।
आँखै अगाडि केही मिनेटमै जीवन उजाडियो।
श्रीमती नितुको सहारा खोसिएको जीन्दगीको रङ उडेको छ।
उनी एक्ली भएकी छिन्। खुसी खोसिएको छ भने मन फाटेको छ।
उनीसँग त श्रीमान शम्भुको यादमात्रै बाँकी छ अब।
अब त फोटोमा सीमित बनेका छन् शम्भु।
उनले नितुलाई मात्रै होइन, १५, १२ र ५ वर्षीय अबोध लालाबालालाई पनि छाडेर गए।
शम्भुको प्राण लिने र घरपरिवारको बिचल्ली पार्ने निच र तुच्छ काम गरे प्रेमकृष्णले।
नितुका परेली सुकेका छैनन्।
मन शान्त भएको छैन्, हुन्डरी चलेको छ।
मन थामिएको छैन। आँशु निरन्तर बगिरहेका छन् शम्भुको यादको पीडामा।
‘के गरेको थियो र ज्यानै लिनुपर्ने मेरो शम्भुको?, जानाजान कुटेरै मारे, सन्तानलाई टुहुरो बनाए, मेरो सिउँदो उजाडे,’ आँखाबाट आँशुका ढिक्का खसाल्दै नितुले आयोमेलसँग भनिन्।
उनी धेरै बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छिन्।
आँखा सुन्निएको छ, शम्भुको कुरा गर्दा झन् मुटु भक्कानिन्छ। फुट्लाजस्तो महसुश गर्छिन्।
‘उसलाई त मारे, मेरा सन्तानलाई कसले हेर्छ? कसरी पाल्ने कसरी पढाउने? पापी घरबेटीले कमजोर भनेर ज्यानै लिए,’ यति भन्दा उनका आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँशु बगिरहेका थिए।
शम्भुको तस्बिर मनमा आइरहन्छ उनको। तस्बिर आए पनि उनी कहिल्यै बोल्दैनन्।
कहिल्यै फर्किंदैनन्, केवल फोटोमा समेटिएका छन्।
‘बिना कुनै गल्ती मेरो श्रीमान मा-यो, छोराछोरीको बुबा, घरको सहारा खोस्यो, हाम्रो संसार उजाडिदियो,’ योभन्दा अगाडि बोल्न सकिनन् नितु।
उनको गला अवरुद्ध भयो भक्कानिन थालिन्।
आँशु थामिएन्। जेठा छोरा राहुल आएर आँशु पुछिदिए।
उनी आफू प्यारालाइसिसकी बिरामी हुन्।
गाह्रो साह्रो काम गर्न सक्दिनन्।
उनका आँखाबाट आँशु खस्छन् तर बोल्न सक्दिनन्।
आँशु बगाउनुबाहेक अन्य विकल्प पनि त छैन।
बोल्न खोजे पनि गलाले साथ दिँदैन।
तीन दिन भइसकेको छ खाना खाएकी छैनन्।
अनुहारको रङ उडेको छ।
बेचैनी र छटपटीमा दिनरात कटेको छ।
रातको निद्रा दिनको भोकले केही अर्थ राख्दैन।
उनलाई जसरी पनि श्रीमानको हत्यारालाई कारबाही गर्नु छ।
श्रीमानलाई न्याय दिलाउनुपर्छ।
छोराको टाउको मुसार्नुबाहेक केही गर्दिनन्।
पाँच वर्षीय कान्छो छोरा आमा रोएको देख्दा, मान्छे जम्मा भएको देख्दा ट्वाल्ल पर्छन्।
ती अबोध बालकलाई के थाहा कसैले उनको बुबाको हत्या गरे भनेर।
उनले कसरी बुझुन् बुबाको हत्या भएको हो भनेर।
उनलाई भनेर पनि त साध्य छैन।
र, त नितु कान्छोलाई बाबा आउनुहुन्छ भनेर भनिरहन्छिन्।
नितुले बोल्न नसकेपछि छोरा राहुलले उनलाई भित्र लगे।
‘जति कुरा ग-यो उति रुनुहुन्छ, बोल्न पनि सक्नुहुन्न। फेरि मुर्छा प¥यो भने झन समस्या हुन्छ,’ राहुलले सुनाए।
राहुल घरबेटीले बिना कुनै गल्ती बुबाको प्राण लिएको बताउँछन्।
उनले घरबेटीले भाडाका लागि जहिल्यै टर्चर दिने गरेको भन्दै रिसको झोंकमा जानाजान शम्भुको ज्यान लिएको गुनासो गरे।
‘हाम्रो त सबै सकियो, गाँस, बास, कपास सबै भताभुङ्ग भयो,’ निन्याउरो मुख लाउँदै रोहित भन्छन्, ‘अब त सम्झनामा मात्रै सीमित हुनुभयो।’
शम्भु सधैं राहुललाई जिम्मेवार र इमानदार बन्नुपर्ने भन्दै सम्झाउँथे।
पढाइमा मेहेनत गरे आफूले जस्तो दुःख पाउनु नपर्ने उनको भनाइ हुन्थ्यो।
‘बाबाले साथीभाइसँग घुम्दा गाली गर्ने, पिट्ने गर्नुहुन्थ्यो, सधैं जिम्मेवार बन भन्नुहुन्थ्यो, अब कसले पिट्ला कसले गाली गर्ला?,’ उनले दुःख पोखे।
बुबाको अभाव भाइहरूलाई भन्दा बढी राहुललाई खड्किएको छ।
कारण, उनलाई थाहा छ बाको हात अनि माया।
भाइहरू सानै छन् उनले थोरै भएपनि जिम्मेवारी बुझेका छन्, आमाको पीडा बुझ्न सक्छन्।
र त उनी भन्दै थिए, ‘जिम्मेवार बन भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो, सिक्न नपाउँदै छाडेर जानुभयो।’
उनलाई बुबाको हत्यारालाई कारबाही गराउनु छ। जसरी पनि बुबालाई न्याय दिलाउनु छ।
उनले बुबा सज्जन, इमान्दार र मेहेनती भएको तर सिधासाधा गरिब भनेरै हेपेको र ज्यानै लिएको बताए।
‘आज यो विपत्ति हाम्रो परिवारलाई परेको छ, भोलि अरू कसैलाई नपरोस्, कसैले यस्तो पीडा भोग्नु नपरोस्,’ राहुलले भावुक हुँदै भने।
उनी भन्न धेरै चाहन्थे तर न भन्न आइरहेको थियो न त्यति धेरै बुझ्न सक्छन्।
उनको एउटै भनाइ छ– अपराधीले सजाय पाउनुपर्छ।
आमा तथा भाइलाई शम्भुले जेनतेन गरी हुर्काइ–पढाइ गरिरहेका थिए।
‘अब कसले जिम्मेवारी लिने? आमा र भाइहरूलाई कसले सम्हाल्ने?,’ उनी भन्छन्।
४२ वर्षीय शम्भु महतो भारत मोतिहारी, पूर्वीचम्पारण ग्राम पोस्ट संग्रामपुर–५ का हुन्।
भारत बिहारका शुम्भुले नेपाललाई कर्मभूमि बनाएको दुई दशक नाघ्यो।
मोतिहारीको घर छाडेर नेपाल पसेपछि उनी केही वर्ष बारा बसे।
नितुसँग बिहे गरेपछि उनी जन्मथलो भारत गए।
भारतमा काम नपाएपछि उनी फेरि नेपाल फर्किए।
यसपटक उनी बारा गएनन्, सिधै काठमाडौं आए।
केही समयपछि उनले श्रीमती नितु र छोराहरू यतै ल्याए।
कहिले सार्वजनिक यातायातमा सहचालकको काम गरे त कहिले डकर्मीको। कहिले मजदुरी त कहिले फलफूल तथा तरकारी बेचे।
जसोतसो गरी घरपरिवार चलाइरहेका थिए।
परिवार पाल्न उनको संघर्ष जारी थियो।
कहिले केही त कहिले केही। फरक–फरक काम गर्दै पाँचजनाको परिवार चलाउँदै आइरहेका थिए।
तर, श्रीमती तथा छोरालाई पार लाउन सकेनन्।
शुक्रबार दिउँसो डेरावालको कुटपिट र आग्लो प्रहारबाट नितुका श्रीमान शम्भुको ज्यान गयो।
काठमाडौं कीर्तिपुर नगरपालिका–६ स्थित भाजंगलमा स्थानीय प्रेमकृष्ण महर्जनको घरमा करिब १४ महिनादेखि श्रीमती र तीन छोरासहित शम्भु डेरामा बस्दै आइरहेका थिए।
दुइटा कोठाको भाडा महिनाको ४ हजार रुपैयाँ तिर्थे।
छोरा राहुलका अनुसार लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण घर भाडा तिर्न निकै समस्या भइरहेको थियो।
तरकारी र फलफूल बेचेर गुजारा चलाइरहेका शम्भुले घरबेटी महर्जनलाई एकमुष्ठ भाडा दिन्छु भनेका थिए।
तर, घरबेटी महर्जनले भाडा नदिए तुरुन्त कोठा सर्न दबाब दिए। लगातारको दबाबपछि उनले अघिल्लो साता १२ हजार रुपैयाँ घरबेटीलाई दिए। एक महिनाको एडभान्स दिँदा पनि महर्जनले घर छोड्न दबाब दिए।
‘हामीले एक महिनाको एडभान्ससमेत दिएका थियौं,’ राहुल भन्छन्, ‘पैसा लिएपछि पनि टर्चर दिन बन्द भएन, घर छाडेर जान धम्क्याइरहे।’
उनका अनुसार घरबेटीका अरू परिवारले पनि पटक–पटक दबाब दिएपछि शम्भु कोठा खोजीमा लागे। उनले पहिले बसेको नजिकै कोठा पाए र केही सामान ओसारे।
केही सामान पुरानै डेरामा भएकाले उनी शुक्रबार पनि सामान ओसारिरहेका थिए।
बुबालाई कुटेको खबर सुनेपछि नयाँ सरेको कोठाबाट राहुलसहित तीनै दाजुभाई दौडेर आए।
शम्भु बेहोस भई भुइँमा लडेका थिए भने नितु श्रीमान कुटेको देख्दा मुर्छा परेकी थिइन्।
‘१०–१५ मिनेट पहिला नै प्रहरी पुगेको भए बुबा बाँच्नुहुन्थ्यो कि?,’ उनले आशलाग्दो अनुहार लगाउँदै बह पोखे।
घरबेटी महर्जनकी पत्नीले राहुललाई घटना गुपचुप गराए पैसा दिने प्रलोभन देखाइन्।
उनले यो कुरा आमालाई भने।
पैसासँग ज्यानको तुलना गर्न नहुने भन्दै जतिसुकै पैसाले बुवालाई फिर्ता ल्याउन नसकिने उनको भनाइ छ।
महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता तथा एसपी सोमन्द्र राठौरले पानीको निहुँमा विवाद हुँदा घटना घटेको बताए। पीडकलाई नियन्त्रणमा लिई घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए।
‘पीडक घरबेटी (प्रेमकृष्ण महर्जन, छोरा परमेश्वर र प्रमोद) लाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ एसपी राठौरले भने, ‘उनीहरूका लागि सात दिनको म्याद थप भइसकेको छ।’
नितुले घरबेटीका परिवारका सबै सदस्यलाई पक्राउ नगरी शव नबुझ्ने अडान राखेकी थिइन्।
उनले शनिबार ६६ वर्षीय महर्जन, उनकी ६३ वर्षीया श्रीमती, दुई छोरा र दुई छोरीविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी भए पनि प्रहरीले प्रेमकृण र दुई छोरालाई मात्रै नियन्त्रणमा लिएको छ।
नितुको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले महर्जनसँगै उनका दुई छोरा परमेश्वर र प्रमोदलाई पनि पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्न अदालतले एक साताको म्याद दिएको प्रवक्ता राठौरले बताए।
नितुले शव बुझ्न नमान्दा मंगलबार दिउँसोसम्म पोस्टमार्टम भएको थिएन।
पोस्टमार्टमका लागि पीडितले फर्म भरे पनि लाश बुझ्न नमान्दा ढिलाइ भएको र आज साँझसम्म पोस्टमार्टम हुने र रिपोर्ट आएपछि मात्रै मृत्युको कारण पत्ता लाग्ने एसपी राठौरले जानकारी दिए।
उनले सूचना पाएलगत्तै प्रहरी घटनास्थल पुगेको समेत दाबी गरे।
भाडावाल सरोकार समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष विश्वराज बस्नेतले पीडितले राहत र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भन्दै अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए।
‘भाडामा बस्ने मान्छे नै होइनन् जस्तो व्यवहार गरी हत्याजस्तो जघन्य अपराध भएको छ, यसबारे सबैको ध्यान आकर्षित भएको छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘सरकार, प्रहरी प्रशासन तथा सरोकारवाला निकायले नियमविपरीत कुनै काम गरे आन्दोलनमा उत्रिन्छौं।’
उनले भोलि यस्तो समस्या सबैमा पर्नसक्ने भन्दै यो सार्वजनिक महत्वको अपराध भएको जानकारी दिए।
पीडितको न्यायका लागि आफू सधैं तयार रहेको भन्दै बस्नेतले घरबेटीले भाडावालप्रति गर्ने गरेको ज्यादती धेरै भएको गुनासो गरे।
‘मजदुर र डेरावालको विषयमा सरकार कहिल्यै बोलेको छैन् जसका कारण आज हत्या हुन पुगेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ठाउँमा सबैको घर हुन्छ, भाडावाल भन्दैमा मनलाग्दी र ज्यान लिन पाइँदैन।’